Chelsea Oo Dhibbic Niyad-Jab Leh Kasoo Qaadatay Kooxda Southampton – Garsoore Sports
Chelsea Oo Dhibbic…
Chelsea ayaa jahwareer la kulantay kaddib markii barbaro 1-1 ah ay la galeen Southampton.
Rigooradii Mason Mount ee daqiiqadii 54aad ayaa Chelsea u badbaadisay dhibic kaddib markii uu Xiddiga amaahda uga maqan kooxda Liverpool ee Takumi Minamino hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Southampton daqiiqadii 33aad ee cayaarta.
Kooxda Chelsea ayaan wali laga badinin todobaddii kulan ee ugu dambeeyay ee ay cayaaraan kaddib markii tababare Thomas Tuchel uu bedelay Frank Lampard.
Chelsea ayaa ciyaarta ku bilaabatay sifiican waxayna ku dhawaatay inay ciyaarta furto lix daqiiqo kadib laakiin Marcos Alonso ayaa kubad uu soo karoosay ka ag dhawaaday.
Kooxda martida ahayd ayaa ku gacan sarreysay kubad heysashada qeybihii hore laakiin waxay ku guuldareysteen inay abuuraan fursado badan oo goolal loo fishay.
Chelsea ayaa ciyaarta ku bilaabatay sifiican waxayna ku dhawaatay inay dhaliso gool kaddib lix daqiiqo balse cayaaryahan Marcos Alonso ayaa kubbad loosoo karoosay uu iyadoo hawada ku jirta hareermarshay goolka.
Kooxda martida ahayd ayaa ku gacan sarreysay kubad heysashada cayaarta qeybihii hore laakiin waxay ku guuldarreysteen inay abuuraan fursado badan oo goolal loo fishay.
Goooooaaaal!!!….. Dhibaatada gooldhalin la’aanta Chelsea ayaa lagu ciqaabay 33 daqiiqo markii ay socotay cayaarta kaddib markii Nathan Redmond uu kubbad cayaaryahan Takumi Minamino kaasoo kasoo dhulka seexshay daafac Cesar Azpilicueta iyo goolhaye Edouard Mendy kahor inta uusan goosha ku laadin kubbada.
Kurt Zouma ayaa daqiiqado kaddib ku dhawaaday inuu dhaliyo goolka barbarraha laakiin madaxiisa waxaa si qurux badan u badbaadiyay goolhaye Alex McCarthy.
Gooooooaaal!!!!! Chelsea ayaa la siiyay rigoore wax yar uun kaddib markii la kala nastay , cayaaryahan Danny Ings dhulka dhigay Mason Mount oo ku jira xerrada ganaaxa isagoo qaatay kubbada goolna u badalay rigooradii lagu galay.
FURSAD WEYN!!! Southampton ayaa ku dhawaatay inay cayaarta dib ugu laabato iyadoo daqiiqadii 70aad uu Jannik Vestergaard kubbad madax aheyd oo uu soo tuuray waxa ay ku dhacday birta.
Callum Hudson-Odoi kuma farxin markii lagu badalay Hakim Ziyech daqiiqado kaddib. Cayaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa loo keenay inuu bedelo Tammy Abraham qeybtii nasashada laakiin ma uusan dhameystirin cayaarta sidaas darteed ayaa loogu celiyay kursigii lagasoo kiciyay markii hore.
Chelsea ayaa heshay fursad weyn oo ay ku dhalin kartay gool soo daahay laakiin Reece James ayaa goosha kormariyay karooskii Mount.